अमेरिकामा भाडा माझ्न जाने हो भन्नेलाई भुलेर पनि अमेरिका कहिले किन बोलाउनु हुदैन ? - Enepalese.com
अमेरिकामा भाडा माझ्न जाने हो भन्नेलाई भुलेर पनि अमेरिका कहिले किन बोलाउनु हुदैन ?
इनेप्लिज २०७५ साउन ३० गते २:०५ मा प्रकाशित
विजय थापा ,कति हास्नु । यो कुरा सम्झंदा र स्मरण गर्दा हासी रहेको हुन्छु । अमेरिकामा भाडा माझ्न जाने हु र ? केहि नपाएर अमेरिका गएर भाडा माझ्ने देखिस ? बरु हलो जोत्छु ,मरे पनि अमेरिका भाडा माझ्न कहिले जान्न ?
बरु ढिडो र गुन्द्रुक खाएर स्वदेशमा जीवन बिताउछु तर अमेरिका केवल भाडा माझ्न कुनै हालतमा जान्न भन्ने धेरै मानिस फेला पर्दछन । मैले दर्जनौ त्यस्ता मानिस फेला पारेको छु ।
अमेरिका आए पछि बच्चा ,बृद्ध ,युवा ,जवान ,आमा ,बुवा ,हजुरबुवा ,हजुरआमा सबैले भाडा माझ्नु पर्छ । भाडा माझ्न अमेरिकामा राजनीति हुदैन । आफ्नो भागमा परे पछि माझ्नै पर्छ ।
अमेरिका हाम्रो ससुराली ,माइत ,मामाको घर ,बडाबा को घर कहिले थियो र ? कहिले हुन्छ अब ? कदापी हुदैन । अमेरिकामा कुलीन घरका सन्तान ,राणा परिवार ,क्षेत्री परिवार ,उच्च खान दानी ब्राम्हण परिवार ,अन्य राज परिवार ,उच्च ओहदाका पदाधिकारी ,नेपालमा एक मात्र पुलपुलिएका छोरा या छोरी या तीन पुस्ते कमाई भएर पढ्न मात्र आएका बिद्यार्थी या सुनको चम्चाले भात खाने या अर्ब पतिले पनि अमेरिकामा नाकको चालले भाडा माझ्नु पर्छ ।
फरक यति हो ,कोही बाहिर पनि गर्ने गर्छन भने अधिकांश दैनिक रुपमा घरमा गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ । अब अमेरिका २० बर्ष या ३० बर्ष अगाडी जस्तो अमेरिकामा छैन । त्यति मात्र हैन ,नेपालमा सिन्को नभाच्ने पुरुष लुरुक्क परेर भाडा माझि रहेका हुन्छन । अधिकांश घरमा ठूला भडडु भाडा ,खडकुला जस्ता भाडा पुरुषले नै मोल्नु पर्छ । सेवक राख्ने क्षमता नै हुदैन । सकिदैन किनभने हामी नेपालीहरु अमेरिका भर्खर दुई दशक देखि अत्यधिक रुपमा आएका हौ ।
नेपालमा बसेर अमेरिकामा भाडा माझ्न जाने हु भन्ने संग मलाई रिस उठ्दैन । अन्यलाई क्रोध लाग्न पनि सक्छ । झनक्क रिस पनि उठ्छ । मलाई बरु हासो लाग्छ । अमेरिका आएका लगभग ३ लाख मानिस भाडा माझेर नै उभो लागेका हुन् त ? त्यसो भए ? यसरी बुझ्दा हुन्छ त ? अमेरिका आएका विविध वर्गका थरि थरिका मानिस सँग संचार कर्मी भएको नाताले कार्यक्रममा भेट भै रहन्छ ।
अमेरिका केहि समयका लागि आएका जसले पनि अमेरिकाका थुप्रै राज्य घुमे पछि आफूले अमेरिकामा भाडा माझ्न किन जाने भन्ने मानस पटलमा रहेको तर अमेरिका आए पछि त्यो बिल्कुल हैन रहेछ भनि पटक पटक कुरा सुन्ने गरेको छु । अमेरिका आएका सबैले अमेरिकामा नेपालीहरुले निकै प्रगति गरेको देख्दा खुशी लाग्छ भन्ने गरेको कार्यक्रम या उनीहरुले अभिव्यक्ति दिन्छन ।
पटक पटक यस्तो सुन्ने गरिन्छ । २५ बर्ष अगाडी ३० बर्ष अगाडी नेपालीहरु अधिकांश बिबिद्यार्थीहरु हुने पढ्न आउथे । उनीहरुलाई बाहिर काम गर्न अनुमति नमिल्ने र काम गर्ने अनुमती नभए पछि अधिकांशले नगद मा यस्तै भाडा माझ्ने तथा अन्य काम पनि गर्थे । अहिले पनि कानुनी कागजात छैन भने यस्तै पनि काम गर्ने चलन हुन्छ । त्यो बाध्यता पनि हुन्छ ।
नेपालमा राम्रो कमाई हुने र केही हद सम्म राष्ट्रियता र देश प्रेमी भावनाबाट ओतप्रेत भएकाहरु जस्ताले यसो भन्ने गर्छन । तर भित्रि चाहना अमेरिका जाने हुन्छ । अमेरिकामा नेपालीहरुको स्थिति र कसरी जीवन संचालन हुन्छ भन्ने हेक्का नपाउनेले अमेरिकामा भाडा माझ्न म जाने तैले देखिस भन्दा मुसु मुसु हास्न मन लाग्छ ।
विश्वका सर्बाधिक जनताले मन पराएको देश अमेरिका । अपबाद बाहेक अमेरिका जान्न भन्ने कोही हुदैन । हरेकलाई अमेरिका आउन मन लाग्छ । घुम्न मन लाग्छ । अनि आफ्ना साथीभाई ईष्ट मित्र सबै अमेरिकामा भएको देख्दा झल् झल् अमेरिका प्रति सित्तैमा रिस पनि उठ्ने हुन्छ । हामी पनि नेपालमा हुदा भाडा माझ्न गईदैन भन्ने गरिन्थ्यो । तर अमेरिका आईयो । यहाँ बसेको १० बर्ष पुरा भएछ । चमेना गृहको भाडा माझ्न परेन । अझ पनि माझिएको छैन तर घरमा अवस्य माझ्ने गर्छु । सबैको घरघर को कथा यस्तै हुन्छ ।
नेपालमा बस्ने केहीलाई अमेरिकाको अल्प ज्ञान भएको कारण अमेरिकामा भाडा माझ्ने काम गर्ने देखिस भन्ने पनि हुन्छन । यसो भनि रहदा यस बिषयमा अमेरिकामा बसेकालाई उत्प्रेरणा गर्न नसकेको सम्झन्छु । आफूले पनि राम्रो संग बुझाउन नसकेको होला कि जस्तो लाग्दछ ।
अमेरिका आए पछि अमेरिका प्रति त्यस्तो सोच मात्र राख्ने ले जाने समयमा नेपालीहरुको उन्नति देखे पछि नेपाली हरु भाडा माझ्ने हैन रहेछन भनि संदेश लिएर जाने गर्छन ।
नेपालमा बसेर अमेरिका नजाने भनि भिष्म प्रतिज्ञा गर्नेहरु पनि अमेरिकाको बिबिधता चिट्ठा सुटुक्क भरेर अमेरिका आएका छन् । अमेरिका प्रति घृणा गर्ने तर आफु नभए पनि आफ्ना सन्तानलाई जसरी पनि अमेरिका पठाउन ब्याकुल रहेका अनगिन्ती मानिसहरु भेटिन्छन ।
अहिले सम्म अमेरिका आएका नेपालीले ठुलो फड्को हानी माथिल्लो स्थितिमा पुगेता पनि संकुचित मष्तिस्क हुनेहरुले अहिले सम्म पनि अमेरिकामा भाडा सफा गर्ने मात्र काम पाइन्छ भन्ने सोचाई राख्नु बिल्कुल गलत हुन्छ ।
त्यस्तो छैन अमेरिकामा । कति उच्च तहमा मानिस पुगी सकेका छन् । जताततै नेपाली छन् र सहयोग पनि गर्छन । अमेरिकामा भाडा माझ्न जाने हो भन्ने लाई भुलेर पनि कहिले किन बोलाउनु हुदैन । मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा । खे खान बोलाउनु भन्ने लाग्छ ?
यस्ता मानिस आए भने दुख दिन्छन किनभने अमेरिकामा आफुले खाएको पनि यिनीहरुले माझ्दैनन । भाडा त् परै जाओस ,थाल पनि यताको उता पनि सार्दैनन । यस्तो लाग्छ यिनीहरु राजा महाराजका घर मै जन्मेका र हुर्केका हुन ।
आफ्नो भाडा त् अरुलाई मोलाएर या दलाएर खानेले पर्यटक या अन्य कुनै उत्सवमा बोलाइयो भने फसाद पर्ने हुन्छ । आफु फसिन्छ । नेपाल गए पछि यिनीहरुले १० गाउँ कुरा काटेर नचाहिदो हल्ला फिजाई दिन्छन । साबधान र सतर्कता अपनाउनु पर्छ । किनभने अमेरिकामा नेपालीहरु भाडा माझेर जीविका चलाउदछ्न भन्ने मानस पटलमा रही रहेको हुन्छ । त्यो हत्पत्त टुट्दैन । जरो गाडेको हुन्छ । उनीहरुको मष्तिस्कमा अमेरिका पुगेका नेपाली जति ठुलो भए पनि भाडा माझ्ने लाई अमेरिका आएका भन्ने छाप रही रहन्छ । तसर्थ यस्ता प्रवृतिका मानिसलाई भुलेर पनि अमेरिका आऊ भन्नु हुदैन । सात कोस टाडा बस्नु पर्छ ।
किनभने मानसिक रुपमा राम्रो कमाएता पनि भाडा माझेर नै कमाएर ठुलो भएको भन्ने सोच्न पनि के बेर ? यस्ता भनेका ढीडाका काल हुन् । किन बोलाउनु पर्यो ?
स्मरण रहोस ,शेष घले ले दुख गरेर सम्पत्ति कमाएका छन् । सदैव गर्नु पर्ने हैन । नायिका रेखा थापाले अमेरिका पहिलो पटक डिसीमा आउदा अमेरिकामा भाडा माझ्ने होला भन्ने सम्झन्थे तर त्यो बिल्कुलै हैन रहेछ भनि आफ्ना कुरा राखिन । नेपाली उखान दुख नगरी सुख हुदैन बने झैँ हिजो भाडा माझ्ने मानिस आज अमेरिकामा ठुला व्यवसायी भएका छन् ।
हुन् त भन्ने लाई मुख थुन्न सकिन्न । प्रजातन्त्र मा सबै कुरा भन्न छुट हुन्छ । तर यस्ता मानसिकता सदैव राखी रहने संग सावधान र सतर्क हुनु पर्ने हो कि त ?